Darajo Been ah Madaxweyne ma lagu Noqdaa? | Xeegonews.com
Darajo Been ah Madaxweyne ma lagu Noqdaa?
Sabanadan dambe waxyaalaha aan la yaabay ee bulshada ku soo kordhay waa sheegasho darajo amba title qofku lahayn oo si fudud loo sheegto.
Waxaad arkaysaa shaqsiyaad iska caadaystay martabad aanu lahayn inay iska sheegtaan. Waxaa arkaysaa qof taariikhdiisa la hayo oo marka loogu yeedho Dr, Ingineer amba Ambassador ka xishoonayn isagoo og inuuna martabadahaa melena ka soo galin.
Waxaa la yaab weyn leh marka aragto dad xil siyaasadeed damacsan oo Martabad ayna lahayn loogu yeedhaayo isaguna ka xishoonayn inuu hee yidhaa.
Dadka dhaqankaa leh waxaa ka mid labada musharax ee Xisbiga Wadani, Cirro iyo Maxamad Cali oo labadaba loogu yeedho Ambassadoor. Midkoona weligii ma noqon Ambassador balse waxay ahaayeen shaqaale hoose oo safaaradeed.
Waa been cad oo laftoodu ay rumaysteen mar haddii hee ay leeyihiin marka Ambassador loogu yeedho. Ambassador jago fudud maaha balse waa xil uu Madaxweyne kuu igmado oo Madaxweyne kale kaa aqbalo kuuna saamaxda inaad matasho qaran dhan. Somaliland intay jirtay labadaa Musharax Safiiro may noqone, ma Syab Barre ayay u ahaayeen Danjire.
Musharaxiin hankoogu yahay inay dal hogaamiyaan side lagu aaminayaa mar hadday sitaan martabado been abuura. Maxaa u diiday inay ka run sheegaan taariikh nololeedkooda?
Waxay ila tahay in dhaqanka noocaas ihi ka turjumaayo isku kalsooni ay ka aradan yihiin labada a Musharax oo kofkastaa dareemaayo aqoondarada haysata. Meelaha qaarkood waxaan ku arkaa labaduba inay PHD haystaan balse sida dad aqoon u lihi sheegayaan Cirro bajalar ma dhamaysan ku xigeenkiisuna waa heer dugsi dhexe oo lodadkii dambe ah.
Waa yaab, in dhaqanka sidaas ah manta lagu macaasho Somaliland oo aqoontu u ahayd astaan aan laga been abuuri karin.
Dadweynaha Somaliland sidey u aamini karaa musharaxiin shahaadado been ah darajooyin been abuura sita. Sidey dal u maamuli karaan dad naftooda been u sheegayaa? Hadday naftoodaba been u sheegeen haba rumaystaane, sidey uga suurtoobi kartaa inay shacbiga run u sheegaan?
Danjireyaasha bugta ah ma hanankaraan hoggaanka dalka waa maya.
Musharaxiinta xilka uugu sareeya u sharaxan marxaladooda caafimaad ayaa xaq loogu leeyahay in shacbigu ogaado. Musharaxiinta Wadani-na xaqbaa loogu leeyahay in soo bandhigaan shahaadaday sheegtaan iyo caddeynta inay Ambassadooro ahaayen.
Qaarbaa odhan doona Faysa-ba shaqaale dawlada hoose ayuu ahaaye, maxaa loogu yeedhaa Injineer. Isaga waxaan u malaynayaa inuu dhaqanka koonfurta ku daydey!
Sikastaba ha ahaatee, Musharaxiintaa waa nay ogaadaan in caqliga ummada iyo garaadkooda lagu gafi karin.
NAASIR OSMAR CUMAR
GUDOOMIYAHA XISBIGA KULMIYE EE OTTAWA